Mejọọ ihe ị na-ekwesịghị iji ekwentị ọhụrụ gị mee Akụkọ akụrụngwa
Daybọchị anyị na-azụta ekwentị ọhụrụ bụ otu n’ime ụbọchị kachasị nwee obi ụtọ maka ọtụtụ n’ime anyị ma ọ bụ mgbe anyị mechara hapụ ekwentị anyị ochie ka anyị banye ụwa ọhụrụ. Ka o sina dị ole na ole bụ ndị ọrụ na-emeso ngwaọrụ ọhụrụ ha dị ka o kwesịrị na e nwere ọtụtụ, ikekwe ọtụtụ, ndị na-emehie nnukwu ihe na ọdụ ọhụrụ a, nke na-ejedebe na mmechuihu.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ebupụta smartphone ma ọ bụ n'ihi na ị chọrọ ịma usoro nke njehie nke anyị kwesịrị izere, taa site na isiokwu a, anyị ga-agwa gị. Ihe 7 ekwesighi iji ihe ohuru ma obu nke ochie gi eme. Mepee anya gi nke oma ma gua nke oma n'ihi na ihie uzo obula na smartphone gi nwere ike ijedebe na nsogbu nke onye obula choro inweta na mbu.
Ọzọ anyị ga-egosi gị mmejọ 7 nke ọtụtụ n'ime anyị na-eji ekwentị anyị eme na nke anyị niile kwesịrị izere. Anyị maara na e nwere ọtụtụ mmejọ ndị ọzọ a na-emekarị, mana ndị a bụ 7 nke ugboro ugboro;
1 Zoputa ya ebe obula
2 Chekwaa foto n’ime ebe nchekwa nke smartphone
3 Buru ya n’abalị niile
4 Wụnye Killer Task na ihe ndị ọzọ na-abaghị uru
5 Wụnye ma wepu ihe n’enweghị ihe ị na-eme
6 Ekwentị gị anaghị eso gị mgbe niile
7 Ejila ekwentị gị mgbe ị na-etinye mmanụ ụgbọala
Zoputa ya ebe obula
Mgbe anyị nwetara ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ, anyị nwere ezigbo agwa nke ịzụrụ mkpuchi maka ya yana n'ọtụtụ ọnọdụ ịtụkwasị plastik nchekwa na ihuenyo ka ọ ghara ọkọ. Agbanyeghị, mgbe anyị nwesịrị ọtụtụ nchebe, anyị na-echekwa ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na-echeghị na mkpuchi nwere ike ọ gaghị ezu.
Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ihe omume ntụrụndụ nke ọtụtụ n'ime anyị nwere bụ debe smartphone anyị n’akpa uwe ogologo ọkpa, ihe nwere ike ịkwụsị n ’ọdachi ozigbo anyị nwere nsogbu ọjọọ. Nke a bụ na ọ bụrụ na anyị ewepụghị ya oge ọ bụla anyị nọdụrụ ala, njedebe anyị nwere ike bụrụ ihe nrụrụ, na-ehulata. Nrụgide a na-arụ na ya dị ukwuu ma ọ bụghị n'ọtụtụ ikpe na ọ na-ehulata nke ukwuu.
Ma ị nwere ama ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ nwee ya ogologo oge, emela ka ihie ụzọ nke ịchekwa ya na akpa azụ nke uwe ogologo ọkpa gị. Ndụmọdụ anyị bụ ka ị debe ya n’ebe ọ na-adịghị etinye nnukwu nrụgide nke na ọ nwere ike ịnwe nsogbu.
Chekwaa foto n’ime ebe nchekwa nke smartphone
Njehie a nwere ike ịbụ otu n'ime ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwughachi na ọ bụ na ole na ole n'ime anyị na-echekwa foto anyị na-eji ngwaọrụ anyị na ebe nchekwa ya.
Dị ka o kwere mee Ọ dị mkpa ịchekwa foto anyị niile na ebe nchekwa na-abụghị nke ime, ka ị ghara ijupụta ya wee gbochie ụfọdụ usoro ịrụ ọrụ ma ọ bụ na anyị nwere ike ịwụnye ngwa ndị ọzọ. Imirikiti ekwentị ndị dị n'ahịa na-enye ohere ka a na-etinye kaadi microSD nke ga-abụrịrị mgbakwunye zuru oke iji chekwaa foto anyị na ọtụtụ faịlụ ndị ọzọ.
Njehie ozo nke emeghachitere adighi eme ndabere foto anyị, dịka ọmụmaatụ na igwe ojii nchekwa ọrụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ekwentị anyị efunahụ ma ọ bụ gbajie, anyị ga-atụfu foto anyị. Biko emehiela nke ịghara ịme ndabere foto gị ma ọ bụ faịlụ gị, n'ihi na nke ahụ bụ nnukwu njehie yana kwa na ọdachi.
Buru ya n’abalị niile
N'ọtụtụ isiokwu anyị akọwaworị nke ahụ nsogbu adighi na ichaghari igwe di ayi nma na otutu oge ebe ọ bụ na ọtụtụ ọnụ na-achọpụta mgbe batrị chara nke ọma. Otú ọ dị, ịkwanye ngwaọrụ mkpanaka anyị n'abalị dum bụ nnukwu ndudue ebe ọ bụ na mgbe ọ na-ejikọ ya na nke ugbu a, ihe dị iche iche na-ekpo ọkụ, nke nwere ike ịkpata nsogbu ndị na-ekwesịghị ịpụta na nke ọ bụla.
Ọ dịkwa ezigbo mkpa idobe smartphone na ebe ọ nwere ike "iku ume" ma gbasasịa ọkụ a kpụrụ site na idobe ya na ọkụ eletrik. Ọ bụrụ na enweghị ike ịjụ ya n'ụzọ ziri ezi, ọ nwere ike ibutere anyị nnukwu nsogbu m chere na ọ gaghị eme onye ọ bụla, maka ọdịmma gị na nke ngwaọrụ gị.
Ndụmọdụ anyị bụ na ị na-ana gị ama mgbe ị nọ ma ọ bụrụ na o kwere omume. Dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-eri nri ma ọ bụ mgbe ị na-eri nri ụtụtụ. Ọ bụrụ na ịchọghị ka ị na-enyocha ya oge niile, ịnwere ike itinye ya na ụgwọ ozugbo ị batara n'ụlọ ma kwụpụ ya mgbe ị na-ehi ụra iji zere nsogbu ọ na-enweghị onye chọrọ ịta ahụhụ.
Wụnye Killer Task na ihe ndị ọzọ na-abaghị uru
Wụnye ngwa na ekwentị mkpanaaka gị bụ ihe n'efu n'ọtụtụ ọnọdụ yana na anyị niile na-eme n'enweghị njikwa dị ukwuu. Otu n’ime ihe ndị anyị na-achọ ịwụnye ọtụtụ oge bụ nke a maara dị ka Onye na-egbu egbu ma na site ugbua gawa anyị nwere ike ịgwa gị na ha enweghị isi.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nkwa ndị a na-ebuli arụmọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka anyị yana ohere nke ịchịkwa usoro, ngwa mepere emepe ma ọ bụ ngosiputa ngwangwa nke nchekwa na ndabere emeghị ihe ọ bụla karịa ime ka ọdụ anyị kwụsịkwuo.
Ndụmọdụ anyị bụ na adịghị wụnye ọ bụla Task Killer ma ọ bụ ngwa ndị yiri ya na-ekwe nkwa ihe ndị yiri nke ahụ n'ihi na ị ga-eme nnukwu ndudue nke nwere ike inye gị ọtụtụ isi ọwụwa.
Wụnye ma wepu ihe n’enweghị ihe ị na-eme
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ smartphone nwere ihe mberede na-atụgharị ihe na oge ụfọdụ. N’okwu ndị a, ihe kacha mma anyị nwere ike ime bụ iwere ya na ọrụ aka anyị ma ọ bụ hapụ ya n’aka onye anyị ma ihe ọ na-eme. Naanị ihie ụzọ nke anyị ekwesịghị ime n'okwu ọ bụla bụ ịnwa idozi nsogbu ahụ n'onwe anyị na-enweghị ihe ga-enyere anyị aka.
N'okpuru ọnọdụ ọ bụla ị kwesịrị ịwụnye ma ọ bụ wepụ ihe na-enweghị echiche ọ bụla ihe anyị na-eme, ebe ọ bụ na anyị nwere ike imetụ ụfọdụ faịlụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ngwaọrụ anyị ma hapụ ya ka njọ karịa ka ọ dị. Amaara m na ọ na-ewe iwe iwe iji ekwentị anyị gaa ọrụ ọrụ aka ma kwụọ ụgwọ euro ole na ole iji dozie ya, mana nke ahụ ka mma karịa imetụ aka na ịgbanye ya kpamkpam.
Cheta, ọ bụrụ na ịmaghị, awụnyere ma ọ bụ iwepụ ihe ọ bụla mana ị maara ihe ọ bụ na ọ bụrụ na ịmaghị ihe ga-eme.
Ekwentị gị anaghị eso gị mgbe niile
N'agbanyeghị ihe ị na-eche n'echiche ekwentị gị adịghị mkpa iso gị mgbe niile ebe ọ bụ na n'ebe ụfọdụ ọ nwere ike ịbụ kpam kpam na-enweghị isi. Ọ bụrụ na ị gaa n'ụsọ osimiri, osimiri ma ọ bụ ugwu, mkpanaka gị ga-anọ n'ihe egwu ma n'ọnọdụ ụfọdụ ọ nwere ike ịnwe obere enyemaka.
Amaara m na o siri ike ịhapụ ekwentị gị n'ụlọ, mana enwere ọtụtụ oge ọ bụ ihie ụzọ iwere ya ma kpughee ya na ihe egwu na-enweghị isi. Ọ bụkwa eziokwu na enwere oge ụfọdụ mgbe mmejọ bụ ịhapụ ya n'ụlọ n'ihi na ọ nwere ike ịba uru n'ezie.
Ndepụta nke mmejọ anyị nwere ike iji ekwentị anyị mee nwere ike ọ gaghị agwụ agwụ, mana anyị ejirila naanị anyị gosi 7 n'ime ha. O doro anya na ị na-abịakwute ọtụtụ mmejọ ndị anyị na-eme kwa ụbọchị, yabụ anyị ga-achọ ka ị zitere anyị ya. Maka nke a, ịnwere ike iji ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma ọ bụ jiri netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ ugbu a.
Ejila ekwentị gị mgbe ị na-etinye mmanụ ụgbọala
N’ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmanụ, e nwere ihe ịrịba ama na-ekwupụta na ọ machibidoro iwu ikwu okwu na ekwentị gị ka ị na-eju mmanụ mmanụ. Ọtụtụ ndị ọrụ na-awụsa akwụkwọ mmado ndị ahụ n'ihi na ha ahụghị ihe ọ bụla dị egwu na nke a na-eme.
O di nwute Ọ nwere ike ịbụ nnukwu ndudue ịjupụta gas na ikwu okwu na ekwentị mkpanaaka gị n'otu oge ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ntakịrị mmanụ ụgbọ ala wụfuru na ebili mmiri magnet na -emepụta mgbe ịnweta oku na-agbasa, ha nwere ike igosi mgbawa nke anyị agaghị esi na ya pụta nke ọma.
Ihe puru omume nke a di obere, mana nkwenye anyi abughi ihe ozo karia ịdọ gi aka na ntị ka ị ghara iji ekwentị gi mgbe ị na-ejuputa gas n'ihi na o nwere ike ịbụ mmeghe nke ị ga-akwụ ụgwọ dị ukwuu
You na-emehie ihe ọ bụla nke anyị gosipụtara gị taa na ekwentị gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Njehie 7 nke ị na - ekwesịghị iji ekwentị ọhụrụ gị mee
Ihe ikwesiri ịnọ n'oge ibu ahụ: gaa na dịka ndị OS na-a attentiona ntị ... n'echi ya anyị nwere onye nwụrụ anwụ ụra iji lelee plọg n'abalị niile
Ma gịnị banyere ịghara ịnara ya ma ọ bụrụ na anyị gaa n'ọhịa, n'ihi na "OS agaghị aba uru" ...
Blog a bụ ihe egwu.
Ngọpụ iji nweta mgbasa ozi, echere m…. Ezi, ma tinye ihe bara uru.
Crunchyroll, ikpo okwu iji lelee ihe nkiri na ngwaọrụ ọ bụla